Dagaal ay dad badan ku dhinteen oo ka socda duleedka caasimadda Puntland | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Dagaal ay dad badan ku dhinteen oo ka socda duleedka caasimadda Puntland
Dagaal ay dad badan ku dhinteen oo ka socda duleedka caasimadda Puntland
Garoowe (Dalkaan.com) – Waxaa maanta dagaal culus uu ka qarxay duleedka magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland, kaasi oo u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed.
Sida ay ogaatay Dalkaan.com, dagaalka ayaa waxa uu xoogiisa ka dhacay tuulada Saax-maygaag, waxayna xiisadan ku saleysan tahay deegaameynta deegaankaas oo u dhaxeeya degmada Boocame ee gobolka Sool iyo tuuada Birta dheer ee gobolka Nugaal.
Khasaaraha dagaalkan ayaa illaa hadda inta la xaqiijiyey waxaa ku dhimatay lix ruux oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamayay, ayada oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 15 qof oo kale.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in dagaalkan uu yimid kadib markii xal laga gaari waayey muranka ka daagan nidaamka deegaameynta, waxaana colaadan ku barakacay qoysas badan, xilli ay abaar iyo xaalad bini’aadanimo ka jirto gobolka.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay laamaha amaanka iyo mas’uuliyiinta maamulka Puntland. Sidoo kale majirto waan-waan illaa hadda laga dhex bilaabay labada Beelood ee dagaalamay.
Ma aha markii u horeysay ee deegaanka Saax-maygaag uu ka dhaco dagaal beeleed, mana jirto illaa hadda wax tallaabo ah oo laga qaaday colaada soo laab-laabatay.
Sawirro: Xasan Sheekh oo balan-qaad muhiim u ah u sameeyey Soomaalida ku nool Turkiga
Booliska oo balan-qaad culus ka soo saaray dhaca tuugada ee Muqdisho ka socda
Daawo: Booliska oo war soo saaray kadib arrin yaab leh oo ka billaabatay Mudisho
Daawo: Xildhibaan shaaca ka qaaday in mushaarkii laga jartay loona hanjabay
Sawirro: Aadan Madoobe, Rooble iyo Mahdi Guuleed oo safarro kala duwan dalka uga baxay
Daawo: Xildhibaan sheegtay in mushaarkii laga jartay loona hanjabay
DQarax is-miidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho + bartilmaameedka
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax goordhow ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomalaiya, gaar ahaan...
SHI KIINYAAWI VS GABDHAHA TIKTOK UGU SHIDAN WAREEJIYOOW HURGUF
Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta oo Khamiis...
QISO XANUUN BADAN IYO FANAAN CAAN AH, COMING SOON IA. #SUBSCRIBE
DEG DEG: Maxkamadda Sare oo go’aan ka gaartay kiiska kursiga Fahad...
Sanbalooshe Kursi Xildhibaan ma ka soo Heli doonaa Xawaadle ...
Manchester City iyo Real Madrid oo xiiseynaya daafaca Chelsea Reece James.
tababarka Arsenal Mikel Arteta oo laacibka Gabriel Martinelli u adeegsanaya...
Xamza: Siyaasadda waxaan rabaa inaan janno ku galo